Metrobus မတော်တဆဖြစ်မှုမှကာကွယ်ရန်ယာဉ်များကြိုတင်သတိပေးစနစ်က cak ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည် - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်install လုပ်ဖို့မတော်တဆမှု "အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်" ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ Tools များမှ Metrobus
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metrobus, တူရကီ 0
ယာဉ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်မတော်တဆမှုကြိုတင်သတိပေးစနစ် Metrobus လိုင်း
IMM, ဒီနံနက် Metrobus မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းစစ်ဆေးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အခြေအနေကအနီးကပ် 13 ပေါ့ပေါ့ဒဏ်ရာရခရီးသည်ကုသစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှု IETT tools များ "အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်" ၏ထပ်မဖြစ်အောင်လျှော့ချဖို့ထိုသို့သောပို့ချအရေးကြီးသောအလုပ်ကောင်းစွာဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
ယာဉ်များ၏ရှေ့မှောက်၌Halıcıoğluဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တနင်္ဂနွေနံနက်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားသည့် Metrobus လိုင်းနာရီသက်ရောက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်။ 13 နိုင်ငံသားအနည်းငယ်မတော်တဆမှုဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ အဆိုပါဒဏ်ရာရ, 112 အဖွဲ့များ Samatya (3), Okmeydanı (4), Sisli Florence Nightingale (2), Cerrahpaşa (2), Etfal (2) ကိုဆေးရုံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။
IETT အဖွဲ့သည်လေ့လာရေးခရီးပုံမှန်ပြန်ဘူတာရုံများတွင်မော်တော်ယာဉ်များကိုရုပ်သိမ်း။ ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), ဖြစ်ပွားနေသောခရီးသည်များ၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းအတွက်ကုသမှုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သောအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
လေးနက်သောအလုပ်ကြုံနေရ running အဆိုပါ Metrobus အညီယာဉ်မတော်တဆမှုရှောင်ရှားရန် IMM,7220 1 နှင့်အတူတစျထောငျကြိမ်တစ်နေ့လျှင်သန်းတထောင်ကီလိုမီတာတင်ဆောင်လာသောခရီးသည်များနှင့်အရာ။
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်အားလုံးယာဉ်မောင်းကအရေးပေါ်ရန်, မီး, မော်တော်ယာဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ, ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံမောင်းနှင်မှုအဖြစ်အကြောင်းအရာများအပေါ်လေ့ကျင့်ရေးပေးအပ်ထားတယ်။ ဒီအပြင်, 17 တထောင်စတုရန်းမီတာအမှုကိုပြုခံရဖို့ကိုပိုပြီးသိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းများနှင့်အတူပေးအပ်ခံရဖို့ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ရေး၏ပို့ဆောင်ရေးအကယ်ဒမီစီမံကိန်းကိုပိုမိုအဆင်သင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်၏ဧရိယာအပေါ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
နောက်ထပ်အတိုင်းအတာကိုလည်း Metrobus မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ဘတ်စ်ကားထံမှ 12 နှစ်ပေါင်း 1.5 သန်းကီလိုမီတာ၏ရေတပ်ကနေဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဲဒီအစားအဲဒီကိရိယာ၏ဘေးကင်းတဲ့မျိုးဆက်သစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းရည်ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူလျင်မြန်စွာအပြီးသတ်ပါလိမ့်မည်။
İETTအချက်အလက်များအရ, ပင်ယာဉ်မတော်တဆမှုများအရေအတွက်ကျဆင်းလာကိုမြင်လျှင်။ 2016 804 2017 640 ပင်မတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ခဲ့ဘွိုင်လာအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သော 2018 404, နှစ်တွင် 2019 189 အတွက်။
ထို့အပြင်နောက်ထပ်မတော်တဆမှုများအရေအတွက်လျှော့ချရန် tools တွေကိုကြိုတင်သတိပေးစနစ်များကို၏ installation အတွက်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းကန့်သတ်, လမ်းသွားပြောင်းလဲမှုသတိပေးမှုစနစ်နှင့်စနစ်ကျေးဇူးတင်ထိုကဲ့သို့သောအသိဉာဏ်ဘရိတ်စနစ်ကတစ်ဦးပိုမိုလုံခြုံပြီးပိုအဆင်ပြေမောင်းနှင်မှုသည်အဖြစ်အရေးကြီးသောတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ပါတယ်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းယာဉ်ခြေရာခံခြင်းစနစ်။
Konya မြေအောက်လမ်းရထားလိုင်းကိုယာဉ်မတော်တဆမှုရှောင်ရှားရန်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရမည် 28 / 02 / 2014 Konya မြေအောက်လမ်းရထားလိုင်းကိုဖြစ်သင့်: Konya လမ်းရထားမတော်တဆမှုအတွက်လွန်မရနိုငျသောကြင်နာများ၏ရှေ့မှောက်၌, အသွားအလာမတော်တဆမှုကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အရာရှိများကလမ်းရထားလိုင်းကို Selcuk တက္ကသိုလ်မတော်တဆသုတေသနကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်လျှောက်လွှာရေးစင်တာဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခ၏အရပျကိုယူကြောင်းမတော်တဆမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလို့ပြော ဒေါက်တာ Osman Nuri သံမဏိ, မြို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ရက်ကိုအတူကြီးထွားလာသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သူကြှနျုပျတို့သညျဤတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးဟုပြောသည်။ Konya မရှိတော့, အလေးပေးအသွားအလာသံမဏိအောက်မှာခံရမည်နေရာမြင့်သောလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ်, ကုန်ကျစရိတ်နှစ်ဦးစလုံး၏သင့်လျော်သောငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအောက်တွင်အချို့သောအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာလမ်းရထားရာအရပျကဆိုပါတယ်နှင့်ဘေးကင်းပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်Nalçacıအတွက် ...
"Bursa ဓါတ်ရထားစနစ်များတွင်" အစီအစဉ်ကောင်စီ 25 / 06 / 2012 ပစ်မှတ်ထား Tram သက်သာရာ BURSA မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ, BURSA ၏မြို့ကောင်စီကဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးတင်သွင်းရလိမ့်မည်။ Bursa စီးတီးကောင်စီဖွဲ့စည်းညီလာခံ '' Bursa တိုက်တွန်း '' အသုံးပြုပုံ '' Bursa ဓါတ်ရထားစနစ် '' ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Bursa မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကစီစဉ် Bursa စီးတီးကောင်စီကိုလည်းတက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီးညီလာခံ '' Bursa တိုက်တွန်း 'ဤအချိန်အစီအစဉ် "Bursa ဓါတ်ရထားစနစ်များတွင်ပါလိမ့်မည်" ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ခန်းမမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်သည့် 29 14.30 နာရီသောကြာနေ့, ဇွန်လAtatürkကွန်ဂရက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ (Merino AKKM) အစည်းအဝေးများတွင် '' ဓါတ်ရထားစီမံကိန်း '' အရှည်မှာဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ Bursa စီးတီးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Semih Pala, Bursa အတွက်လမ်းရထားစနစ်ကစိတ်ချဖို့ရည်ရွယ်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သူတို့အစီအစဉ်ကိုလက်ခံရရှိအစည်းအဝေးတွင် '' Bursa တိုက်တွန်း '' ...
TCDD6။ မီးသတ်စခန်းအဆောက်အဦးနှင့် 33 အမျိုးမျိုးဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဘူတာ Setup ကိုလေလံအတွက်တစ်ခုချင်းစီနှိုးဆော်သံစနစ်က 06 / 07 / 2012 တာဝန်ရှိလေလံ: Hasan Mutluay လေလံ Manager ကိုဖုန်းနံပါတ်: 03224575354 လေလံ Manager ကိုဖက်စ်: 03224592354 Ilan နေ့စွဲ: 22.06.2012 00: 00: 00 လေလံနေ့စွဲ: 16.07.2012 00: 00: 00-14.00 သတ်မှတ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်: 250 £တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း: Works တွင်တင်ဒါအကြောင်းအရာ: Yapim အလုပ်လုပ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: 2012 / 77920 မေးလ်: ငါ TCDD6xnumxbolgeemlakveinsaat@gmail.co ။6STATION ကို TCDD ထံမှ UNITS 33 ၏ GAR နှင့်အမျိုးမျိုးသောဒေသဆိုင်ရာရုံးအဆောက်အအုံများမီးသတိပေးအချက်ပြစနစ် Installer ။ ဒေသန္တရရုံး TCDD6။ ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်6ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏အဆောက်အအုံမီးဘေးနှိုးစက်စနစ်တည်ထောင်အမျိုးမျိုးဘူတာနှင့်ဘူတာနံပါတ် 33 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအပိုဒ် 4734 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2012 77920-အုပ်ချုပ်ရေးက) ...
SAMULAŞ "TS မာခ်က ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်" လက်မှတ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ 05 / 06 / 2018 Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Samulaş "TS မာခ်က ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်" ၏လက်မှတ်။ SAMULAŞ Inc က ဌာနချုပ် Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်စိတ်ထဲ Sahin, Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Coates ဂျုံးစ်, Kadir Gürkanများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူSamulaşဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်SAMULAŞန်ထမ်း "TS မာခ်က ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်" လက်မှတ်နှင့်အလံတင်ဆက်မှုအခမ်းအနား edited ။ ဘုတ်အဖွဲ့SAMULAŞစိတ်ထဲ Sahin ၏လက်မှတ် Tse လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဒါရိုက်တာ Erol တော့ပူပန် Samsun, Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်နှင့်ဥက္ကဋ္ဌတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်အခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား Sahin သမ္မတအသစ် TARGET သို့ "TRAFFIC လုံခြုံမှု Management System လက်မှတ်" သမ္မတ Sahin, ...
"Bursa ဓါတ်ရထားစနစ်များတွင်" အစီအစဉ်ကောင်စီ
TCDD6။ မီးသတ်စခန်းအဆောက်အဦးနှင့် 33 အမျိုးမျိုးဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဘူတာ Setup ကိုလေလံအတွက်တစ်ခုချင်းစီနှိုးဆော်သံစနစ်က
SAMULAŞ "TS မာခ်က ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်" လက်မှတ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Yeşilhisarရေနုတ်မြောင်းအလုပ် Gara အားဖြင့်ရေကြီးမှုကိုကာကွယ်ရန်ပြုခံရဖို့
မှောင်ခိုတားဆီးဖို့ဒီလိုမြင်ကွင်းရထားပေါ်တွင် X-ray ။
လေအေးပေးစက် Bursaray အရှေ့အဆင့် Tools များအဘို့သောင်တင်